Iindlela eziQhelekileyo zoMqhubekisi woSetyenziso lweSoftware kufuneka azi i-2020 Martech Zone
Naphi na apho ujonga khona, kuyacaca ukuba itekhnoloji yeselfowuni iye yadityaniswa eluntwini. Ngoku ka Uphando lweNtengiso yeZizwe eziManyeneyo, ubungakanani bemakethi ye-app yomhlaba wonke yafikelela kwi-106.27 yezigidigidi kwi-2018 kwaye kuqikelelwe ukuba ifike kwi-407.31 yezigidigidi nge-2026. Ixabiso eliza nohlelo kumashishini ayinakujongelwa phantsi. Njengoko intengiso yeselfowuni iqhubeka nokukhula, ukubaluleka kweenkampani ezibandakanya abathengi bazo ngeapps yeselfowuni kuya kuba phezulu kakhulu.
Ngenxa yotshintsho lwezithuthi ukusuka kwimidiya yewebhu yemveli ukuya kusetyenziso lweselfowuni, indawo yeapp ihambe amanqanaba akhawulezileyo endaleko. Ukusuka kwiindidi zeeapps ukuya kuyilo lweapps yendlela, zininzi izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa uthatha isigqibo sokuphuhlisa usetyenziso lweshishini lakho. Ukwakha nje usetyenziso kunye nokuphosa kwivenkile yeapp akusayi kusebenza kakuhle ekuguquleni abathengi. Ukuzibandakanya okwenyani kunye nokuguqula kufuna amava omsebenzisi anempembelelo.
Iimfuno ezihlala ziguquka zabathengi ziguqula iimfuno zentengiso, kwaye ukusebenzisa uyilo lokucinga kuphuhliso lwakho lweapp kubalulekile. Unoko engqondweni, kukho iindlela ezithile zoyilo losetyenziso olusuka kwi-2019 ekufuneka uyikhumbule ngexesha lenkqubo yophuhliso enokuthi ichaze u-2020.
Umkhwa woku-1: Uyilo olunezimbo zomzimba ezintsha engqondweni
Izimbo zomzimba eziphambili ezisetyenzisiweyo kwizicelo ezihambayo ukuza kuthi ga ngoku ziye zatshintshela kwaye zacofa. Iifayile ze-UI eziSelfowuni kwi2019 zibandakanya into eyaziwa njenge Iimpawu zeTamagotchi. Nangona igama linokubangela ukubuyela emva kwizilwanyana ezifuywayo, i-Tamagotchi Izimbo zomzimba kwizicelo zeselfowuni zokongeza inqanaba eliphezulu leemvakalelo kunye nezinto zabantu. Injongo yokuphumeza ezi mpawu kuyilo lwakho kukuthatha iinxalenye zezicelo zakho ezingasebenzi kakuhle ngokubhekisele ekusebenzeni kwayo kwaye uyomeleze ngomtsalane abasebenzisi abazibandakanya nawo ukuphucula amava abo xa bebonke.
Ngaphaya kwentshukumo yeTamagotchi, uyilo lwesoftware yokuyila iya kuba nabasebenzisi abazibandakanya nezinto ezikwisikrini ngokusebenzisa izijekulo ngokuswayipha ngokucofa Ukusuka kuphuhliso lokuhambisa imiyalezo ngokuswayipha ngokushukuma komzimba okusetyenziswe njengeyona nto iphambili kwizicelo zokuthandana, ukuswayipha kuye kwaba yeyona ndlela yendalo yokunxibelelana nescreen sokuchukumisa kunokucofa.
Umkhwa 2: Gcina ubungakanani bescreen kunye neTekhnoloji enokunxitywa engqondweni xa uyila iiNkqubo zeSelfowuni
Kukho umahluko omkhulu xa kufikwa kubungakanani bescreen. Ngokufika kwee-smartwatches, iimilo zescreen ziqale ukwahluka ngokunjalo. Xa uyila usetyenziso, kubalulekile ukwenza uyilo oluphendulayo olunokusebenza njengoko kuhlosiwe kuso nasiphi na isikrini. Ngoncedo olongezelelekileyo lokuhambelana neewatchwatches, uqinisekile ukwenza kube lula kubathengi bakho ukuba badibanise usetyenziso lwakho ngokulula nangokufanelekileyo kubomi babo. Ukuhambelana kweSmartwatch iyaqhubeka ngokukhula ibaluleke ngakumbi, kwaye ngenxa yoko yayihamba phambili kwi-UI ehamba phambili ngo-2019. Ukungqina oku, ngo-2018, bekukho izigidi ezili-15.3 zeewatchwatches ezithengiswa eUnited States kuphela.
Itekhnoloji enokunxiba lishishini eliya kuthi liqhubeke nokukhula kwaye lichaze imeko yoyilo lweapps kulo nyaka. Kwixesha elizayo, izicelo kuya kufuneka zibandakanye imisebenzi yokwenyani eyongeziweyo kwiiglasi ezifanelekileyo ngokunjalo. Ukuphuhlisa isicwangciso se-AR ngoku kunye nokuphumeza ezo zinto kwi-app yeselfowuni kungadlala indima ebalulekileyo ekufumaneni ukunyaniseka kwabamkeli bokuqala.
Umkhwa wesi-3: Iitrafti zoYilo lweSelfowni zigxininisa kwiSikimu sombala
Imibala iqulethe uphawu lwakho kwaye inxulumene ngokusondeleyo negama lakho. Yile nto kanye yesazisi esinceda amashishini ukunxibelelana nabathengi bexesha elizayo.
Nangona isikimu sombala sinokubonakala ngathi asisiyiyo inkxalabo ephambili okanye uyilo olucacileyo lokusebenza, utshintsho olunobuqili kwimibala kunokuba sisizathu sokuphendula okuhle okanye okungalunganga okokuqala kwi-app yakho - ukuqala kokuvela kwenza wonke umahluko.
Inkqubo yoyilo loyilo lweselfowuni esetyenziswa rhoqo kukusetyenziswa kwemibala emibala. Xa iigradients zongezwa kwizinto ezisebenzisanayo okanye imvelaphi, zongeza ukungcangcazela okwenza ukuba iapp yakho ibambe iso kwaye ime ngaphandle. Ukongeza kwimibala, ukuya ngaphaya kweempawu ezimileyo kunye nokuhambisa oopopayi abaphuculweyo kunokwenza ukuba isicelo sakho sibandakanyeke ngakumbi.
Umkhwa 4: Umgaqo woyilo lwe-UI weSelfowuni ongaze uphume kwisitayile: Ukugcina kulula
Akukho nto ibangela ukuba umthengi acime isicelo sakho ngokukhawuleza kuneentengiso ezingenayo okanye ujongano lomsebenzisi olunzima kakhulu. Ukubeka phambili ukucacisa kunye nokusebenza ngaphezulu kwenani leempawu kuya kungqina ukudala amava omthengi angcono. Esi sesinye sezizathu zokuba uyilo lweapps zigxininise ukulula unyaka nonyaka.
Ukwenza oku, kubalulekile ukuba usebenzise ubungakanani beescreen, njengoko bekutshiwo ngaphambili. Uyilo lweMinimalistic luvumela abantu ukuba bagxile kwinto enye ngexesha kwaye bathintele ukugcwala ngokweemvakalelo okuhlala kukhokelela ekubeni abantu babe namava amabi. Inye kulula ukumilisela inqaku loyilo lwe-UI yeselfowuni kukudityaniswa kwamava endawo. Oku kusebenzisa iinkonzo zendawo ezamkelwe ngabasebenzisi beselfowuni ngokuzimisela njengoko ixesha lihamba.
Umkhwa wesi-5: Sebenzisa iSprint Stage yoPhuculo
Inkqubo yophuhliso inezigaba ezininzi, ukusuka kuyilo lweprinta olusebenzisa izixhobo zokuhambisa usetyenziso ekwakheni prototype, ukuvavanya, kunye nokwazisa usetyenziso. I-sprint yokuqala idlala indima ebalulekileyo ekuchongeni ezona ndawo ziphambili abasebenzisi bakho abachitha ixesha elininzi kwaye baqinisekise ukuba ezo ndawo zixelela ibali lophawu lwakho ngelixa uhambisa amava okhethekileyo kubasebenzisi. Akumangalisi ke ngoko ukuba le nkqubo ihlale kuluhlu lwethu lweendlela ezisetyenziswayo zoyilo lokubukela.
Ukukhetha ukuzibandakanya kwi-initial Uyilo lweentsuku ezi-5 lokubaleka inokukunceda ekuchongeni nasekuqiniseni iinjongo zolu setyenziso. Ukongeza, ukusebenzisa ibhodi yamabali kunye nokwakha iprototype yokuqala ukuvavanya kunye nokuqokelela ingxelo inokwenza okanye iphule imveliso yokugqibela. Le nkqubo iqinisekisa ukuba ungena kwinqanaba lokuphuhlisa ngokuchazwe ngokucacileyo, iinjongo ezikhethwe ngobuchule. Kwaye, kukunika ukuzithemba ukuba iprojekthi yakho yophuhliso lweprogram iya kubangela ukuguqula umxholo ube yinyani.
Qinisekisa ukuba uyilo lwakho lweSelfowni yeyona nto ibalaseleyo
Ukuphuhlisa usetyenziso lweselfowuni kuya kuba yimfuneko yokuzibandakanya kwabathengi kunye nokufunyanwa. Eyona nto ibaluleke ngakumbi kukuqinisekisa ukuba usetyenziso lukwinqanaba eliphezulu kwaye lubonelela ngamava abathengi. Inyaniso, Iipesenti ezingama-57 ze-intanethi Abasebenzisi bathi ngekhe bacebise ishishini ngeqonga elenzelwe kakubi kwi-intanethi. Ngaphezu kwesiqingatha ukugcwala kweintanethi kweenkampani ngoku kuvela kwizixhobo eziphathwayo. Ukugcina oko engqondweni, i-UX lelona candelo libalulekileyo lokukhupha usetyenziso lweshishini. Yiyo loo nto ukugcina izinto ezinje ngoyilo losetyenziso lwe-mobile engqondweni kubaluleke kakhulu.
Uguquko lweselfowuni lukwentyatyambo epheleleyo. Ukuchuma kwindawo yentengiso yanamhlanje, ukwamkela ubuchwepheshe obuphambili, ukukhwela umgama wenkqubela phambili, kunye nokuhlala unolwazi malunga neendlela zangoku zoyilo lwe-app kukuqinisekisa ukuba uhlala ufanelekile kwaye uyakwazi ukutya kwiimfuno zabathengi bakho.
tags: Umbala wosetyenziso lweselfowuniImiba yophuhliso lwesoftwareIxabiso lesoftwaresicelo se sithuthiujongano lomsebenzisi oselfowuniSprinttamagotchi izijekuloiintsingiseloItekhnoloji yokunxiba
Phambi kokuseka iiLebhu zeLebhu eziBlue ngo-2009, uBobby wayenguMphathi weNkqubo kwiMicrosoft kwicandelo leeServer kunye nezixhobo. Kunye nomsunguli-co-Jordan Jordan Gurrieri, uBobby-umbhali-mbhali I-Appsters: Isikhokelo sabasaqalayo kushishino losetyenziso. KwiiLebhu zeLebhu eBlue, indima kaBobby njenge-CEO ibandakanya ukubekwa kweliso kubuchule kunye nobuchwephesha kuzo zonke ii -apps esizivelisayo. UBobby waphumelela kwiDyunivesithi yaseWaterloo ngesidanga seMathematics kunye neNzululwazi yeKhompyuter kwaye wagqiba i-MBA yakhe e-Columbia Business School. Uthanda i-crepes.